မြန်မာရေတပ် ရဲ့ Kilo Class နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် Ming Class ဘယ်သူ က တရုတ်ကြီး ဂျင်းကိုမိတာလည်း ? - Pyit Time Htaung
Homepage / World News / မြန်မာရေတပ် ရဲ့ Kilo Class နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် Ming Class ဘယ်သူ က တရုတ်ကြီး ဂျင်းကိုမိတာလည်း ?
မြန်မာရေတပ် ရဲ့ Kilo Class နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် Ming Class ဘယ်သူ က တရုတ်ကြီး ဂျင်းကိုမိတာလည်း ?
Type035 အမျိုးအစား Ming Class ရေငုတ်သငေ်္ဘာတွေဟာ ဆိုရင် ၁၉၅၀ ခုနှစ်က ထုတ်လုပ် ခဲ့တဲ့ ဆိုဗီယက်ထုတ် Romeo Classတွေကို အစားထိုးဘို့ရန် အတွက် တရုတ်နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရေငုတ်သငေ်္ဘာအမျိုးအစားတွေပဲဖြစ် ပါတယ်။
Romeo အတန်းစား ရေငုတ်တွေသငေ်္ဘာတွေကိုတော့ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု က ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း အစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ဂျာမန်တွေ ရဲ့ XXI Type U Boatတွေကို အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ် ပါတယ်။
၁၉၈၀ပြည့်နှစ်ကာလတွေ မှာတော့ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ဟာ Romeo Class တွေကို Tango Classတွေနဲ့ အစားထိုးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆိုဗီယက်တွေဟာ Tango Classတွေနေရာမှာ Kilo Class Subတွေနဲ့ အစားထိုးခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။
ဒါကြော င့်မို့လို့ ဒီနေ့ခေတ်အခြေအနေအရ ဆိုရင် ဆိုဗီယက်တို့ ရဲ့ Romeo Classနဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့ Ming Class Subတွေက အတော်လေး ကို ခေတ်နောက်ကျသွားပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေရှ့်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားတို့ကတော့ အဆိုပါ Ming Classတွေကို အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းထုတ်လုပ် တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ကတော့ Mingအတန်းစားတွေကို ၁၉၉၄ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၅ခုနှစ်အတွင်းမှာ ရုရှားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ 12 Kilo Class636/နဲ့ 877EKMတွေနဲ့ အစားထိုး အသုံးပြုခဲ့ ပါ တယ်။
အသုံးပြုမှု ကိုတော့ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ လုံးဝရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်ဗျ။
သူတို့မသုံးတော့ တဲ့ အဲဒီရေငုတ်တွေ ကို ပေါက်ဖော်ကြီး က မာမူ တို့ကို ဂျင်းထည့် လွတ်လိုက်တာ ။
မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုလည်း စည်းရုံးခဲ့ပေမယ့် ကျနော် တို့ တပ်မတော်(ရေ)ကတော့ လွတ်သွားတယ်လို့ ဆိုရမယ်ဗျ ။
မြန်မာ့ Subက ခေတ်အောက်တယ် ဆိုရင်တောင် အနားက ပေါက်ဖော်ကြီး ဂျင်းမိသွား တဲ့ မာမူတို့က နှစ်ဆလောက် ပိုပြီးအောက်သွား တယ်လို့ ဆိုရပါတော့မယ် ခင်များ ။
မောင်ဉာဏ်မင်း(ဆားလင်းကြီး) အားလေးစားစွာ ခရက်ဒစ်ပေးပါသည်။
ကိုးကား-Myanmar Defence Review
Type035 အမ်ိဳးအစား Ming Class ေရငုတ္သေင္ၻာေတြဟာ ဆိုရင္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္က ထုတ္လုပ္ ခဲ့တဲ့ ဆိုဗီယက္ထုတ္ Romeo Classေတြကို အစားထိုးဘို႔ရန္ အတြက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံက ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေရငုတ္သေင္ၻာအမ်ိဳးအစားေတြပဲျဖစ္ ပါတယ္။
Romeoအတန္းစား ေရငုတ္ေတြသေင္ၻာေတြကိုေတာ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု က ဒုတိယကမာၻစစ္ အတြင္း အစြမ္းျပခဲ့တဲ့ ဂ်ာမန္ေတြ ရဲ႕ XXI Type U Boatေတြကို အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ ပါတယ္။
၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္ကာလေတြ မွာေတာ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ဟာ Romeo Class ေတြကို Tango Classေတြနဲ႕ အစားထိုးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဆိုဗီယက္ေတြဟာ Tango Classေတြေနရာမွာ Kilo Class Subေတြနဲ႕ အစားထိုးခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။
ဒါေၾကာ င့္မို႔လို႔ ဒီေန႕ေခတ္အေျခအေနအရ ဆိုရင္ ဆိုဗီယက္တို႔ ရဲ႕ Romeo Classနဲ႕ တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ Ming Class Subေတြက အေတာ္ေလး ကို ေခတ္ေနာက္က်သြားၿပီလို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ့ အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒရွ႔္နဲ႕ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ကေတာ့ အဆိုပါ Ming Classေတြကို အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
မူရင္းထုတ္လုပ္ တဲ့ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ကေတာ့ Mingအတန္းစားေတြကို ၁၉၉၄ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၅ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ႐ုရွားနိုင္ငံကထုတ္လုပ္ထားတဲ့ 12 Kilo Class636/နဲ႕ 877EKMေတြနဲ႕ အစားထိုး အသုံးျပဳခဲ့ ပါ တယ္။
အသုံးျပဳမႈ ကိုေတာ့ ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာ လုံးဝရပ္ဆိုင္းပစ္လိုက္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္ဗ်။
သူတို႔မသုံးေတာ့ တဲ့ အဲဒီေရငုတ္ေတြ ကို ေပါက္ေဖာ္ႀကီး က မာမူ တို႔ကို ဂ်င္းထည့္ လြတ္လိုက္တာ ။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကိုလည္း စည္း႐ုံးခဲ့ေပမယ့္ က်ေနာ္ တို႔ တပ္မေတာ္(ေရ)ကေတာ့ လြတ္သြားတယ္လို႔ ဆိုရမယ္ဗ် ။
ျမန္မာ့ Subက ေခတ္ေအာက္တယ္ ဆိုရင္ေတာင္ အနားက ေပါက္ေဖာ္ႀကီး ဂ်င္းမိသြား တဲ့ မာမူတို႔က ႏွစ္ဆေလာက္ ပိုၿပီးေအာက္သြား တယ္လို႔ ဆိုရပါေတာ့မယ္ ခင္မ်ား ။
ေမာင္ဉာဏ္မင္း(ဆားလင္းႀကီး) အားေလးစားစြာ ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္။
Posted in World NewsTagged Type035 အမျိုးအစား Ming Class ရေငုတ်သငေ်, ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု, မြောက်ကိုရီးယား, ရုရှားနိုင်ငံ
Previous post ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကိစ္စ နိုင်ငံတကာ နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဖို့ တရုတ် အဆင်သင့်ရှိ ဟု တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်ပြောပြီ
Next post အိန္ဒိယကို ဝင်မယ့် မုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ လာမည့် ရက်များအတွင်း မိုးရွာနိုင်